विद्यादेवी भण्डारीले को एमाले को काङ्ग्रेस भनेर हेर्न सक्नुहुन्‍न, तर कसरी चिन्‍नु भो ? | Khabar Sadan खबर सदन
Home राजनीति विद्यादेवी भण्डारीले को एमाले को काङ्ग्रेस भनेर हेर्न सक्नुहुन्‍न, तर कसरी चिन्‍नु...
वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता टिकाराम भट्टराईले राष्‍ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम को एमाले र को काङ्ग्रेस भनेर हेर्न नसक्‍ने तर्क गरेका छन् । ७६(५) को व्यवस्थामा राष्ट्रपतिले कुन दलको भनेर चिन्नु नपर्ने भन्‍दै त्यसैले यो दुराशयपूर्ण भएको तर्क गरेका छन् ।
‘अघिल्लो प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा भने जस्तो छैन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको नियत तिगडमबाजी गरेर जसरी पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने बदनियत देखिएको हो । विद्यादेवी भण्डारीले को एमाले को काङ्ग्रेस भनेर हेर्न सक्नुहुन्न । उहाँले कसरी चिन्नु भो ? राजनीतिक नेता विद्यादेवी भन्डारीले चिन्नुहुन्छ होला । तर सम्मानीय राष्ट्रपतिले चिन्नुपर्दैन । ७६(५) को व्यवस्थामा राष्ट्रपतिले कुन दलको भनेर चिन्नुपर्दैन । त्यसैले यो दुराशयपूर्ण छ ।’
Previous articleके मोबाइल फोनले क्यान्सरको जोखिम निम्त्याउँछ ? सच्ची हो र कसरी?
Next articleलकडाउनमा १२ सयभन्दा बढी शिक्षक विद्यालयबाट निष्कासित , किन ?